कसरी बस्ने काठमाडौँमा !
गुनकेशरीको फूल ली सिरमा
काठमाडौँ उपत्यकाको महिमा–गान गाउन चाहनेहरूले आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा सिर्जित यी हरफहरू निश्चय नै गुन्गुनाउने गर्दछन् । उन्नाइसौं शताब्दीको काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दरता, जनजीवन र मानवीय सम्बन्धलाई पर्गेल्ने शब्दहरू छन्, आदिकविका यो सुन्दर काव्यभित्र । आदिकविले दसकौंअघि व्याख्या गरेको कान्तिपुरी नगरी अब भने तत्कालीन समयको जस्तो त रहेन नै, न त केही दशकअघिकै जस्तो छायाँ–छविबीच कान्तिपुरी नगरीलाई भेट्न सकिन्छ । अझ, चपला, अवलाहरू गुनकेशरीको फूल सिउँदोमा सजाएर एक सुर, एक लयमा हिँड्ने कुरा त मिथक नै बनिसक्यो अब त ।
वर्तमान पुस्ता गुनकेशरीको फूलसँग परिचित छैन । महानगरका केही उद्यानहरूमा अरू प्रजातिका फूलहरू टन्नै फुलेको देख्न सकिन्छ । सीमित रैथाने र अधिकांश प्रवासी फूलहरूको बाहुल्यबीच गुनकेशरीको फूल लोप हुँदै जानु स्वाभाविकै हो । अतः गुनकेशरी नै नभएपछि चपला, अवलाहरूले सिरमा सजाएर हिँड्नु टाढाको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, कान्तिपुर नगरीको समृद्ध कथा र गाथा अब भने कहालीलाग्दो व्यथामा परिणत हुँदै गएको छ । जनघनत्वको भारले थिचिएको छ, कान्तिपुर नगरी । रोजगार, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा र अरू विभिन्न खाले सेवा र सुविधाहरू कान्तिपुर नगरीमै थन्किएको हुँदा मानिसको चाप बढ्नुलाई अचम्म मान्नुपर्ने देखिँदैन । जनघनत्वको मार खेप्दै उँघिरहेको कान्तिपुर नगरी पछिल्लो समय त वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि निम्छरो र निरीह महानगरको रूपमा बदलिँदै गएको छ । कान्तिपुर नगरीभित्र व्याप्त वायु प्रदूषणले यो चार भन्ज्याङभित्रको खाल्टोलाई विस्तारै अँध्यारोतिर धकेल्दै लगिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
केही समयअघि, फोटो पत्रकार चन्द्रशेखर कार्कीले आकाश मार्गबाट एउटा तस्बिर खिच्नुभएको थियो । काठमाडौँ, धुलिखेल र बनेपाका भूभागसमेत देखिने सो तस्बिर एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाकालाई केन्द्रित गरेर खिचिएको उक्त तस्बिरमा काठमाडौँमाथिको आकाशमा जमिरहेको प्रदूषित वायु प्रस्टै देखिन्थ्यो । कचौरामा तातो पानी हाल्दा बाफ उड्न अप्ठेरो मानेजस्तै देखिन्थ्यो, कान्तिपुर नगरीभित्र जमेर बसेको प्रदूषित वायु । यसले देशको राजधानीको भयावह पाटोलाई उघार्न मद्दत पु¥याएको ठान्न सकिन्छ ।
विश्वका वायु प्रदूषित राजधानीहरूमध्ये अघिल्लो लहरमै परेको छ काठमाडौँ । किन काठमाडौँले मन–मस्तिष्कभरि वायु प्रदूषणको मार खेपिरहेको छ ? यसमा राज्यका सञ्चालकहरूका अदूरदर्शी नीति र वायु प्रदूषण कम गर्नेतिर देखिएको उदासिनतालाई नै मुख्य कारक तìवका रूपमा जिम्मेवार ठह¥याउन सकिन्छ । किनकि, राज्यका सञ्चालकहरूले चाहे भने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कुनै आइतबार कुरिराख्नु पर्दैन ।
विदितै छ, कुनै पनि देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा शहर–बजारमा नै बसोबास गर्दै आएका हुन्छन् । सेवा, सुविधा आदि कारणहरूले शहर–बजारमा मानिसहरूको बसोबास जम्नुलाई अन्यथा ठान्न पनि सकिँदैन । अझ, राजधानीहरूमा जनघनत्व हुनुलाई स्वाभाविक पक्ष मान्न सकिन्छ । देशको राजधानी हरेक सेवा, सुविधा र स्रोतले भरिपूर्ण हुने भएका हुँदा जनघनत्व बढ्नु सामान्य पक्ष हो । जनघनत्वको चाप हुने देशको राजधानीलाई कसरी व्यवस्थित, सुन्दर, आकर्षक, प्रदूषणमुक्त राख्ने भन्ने चाहिँ राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूकै योजना र दूरदृष्टिमा निर्भर रहने पक्ष हो ।
कान्तिपुर नगरीलाई दिनानुदिन प्रदूषणले च्याप्दै लगिरहेको विषय सबैका निम्ति टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो त ? त्यो दिशातिर ध्यान पुगेको छ वा छैन भनेर सोच्नु अनिवार्य देखिन्छ । वायु प्रदूषणले राजधानीलाई निचोरेको सबैले महसुस गरेको विषय हो । तर, वायु प्रदूषण उत्पन्न हुनुका कारक तìवहरू के के हुन् त ? यसलाई पर्गेल्नेतिर कत्तिको चासो पोखिएको छ ? यी पक्षलाई पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो अवधिमा करिब ४५ अर्बको सवारी साधन देशभित्र आयात भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बताउँछ । आयात भएका सवारी साधनमध्ये अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बासिन्दाले खरिद गरेको बताइन्छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले त्रासदीपूर्ण मोडमा उभ्याइदिएको काठमाडौँबासीलाई लगत्तै अर्को झट्का लाग्न पुग्यो । त्यो झट्का थियो– नाकाबन्दी । नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थको आयात ठप्प भएपछि तेलको अपर्याप्तताका कारण सवारी साधन गुड्ने र आयात हुने क्रम घट्न पुग्यो । तर, अहिले सबै पक्ष सहज हुँदै गएका छन् र केही महिनायता सवारी साधन खरिद गर्ने क्रम अपत्यारिलो रूपले बढ्न पुगेको छ । तसर्थ, बढ्दो सवारी चापसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपतका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको समस्या उत्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको ग्राफ उकालो चढ्नुमा सवारी साधनको बढ्दो आयात र चाप रहेको कुरालाई पहिलो नम्बरमा राख्नु अनुचित नहोला । अझ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अधिकांश सवारी साधनहरू पेट्रोल नभएर डिजेलबाट चल्ने गरेको बताइन्छ । डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू प्रदूषणका लागि मुख्य कारक मान्ने गरिन्छ । हुन पनि, सरकारले डिजेलका गाडीहरू विस्थापन गरेर ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नेतिर तदारुकताका साथ पाइला नचाल्दा समस्याले विकराल रूप लिँदै गएकोमा सन्देह देखिँदैन । अर्कोतिर, सवारी चाप कम गर्न र वायु प्रदूषण घटाउन जोर–बिजोर प्रणाली उपयुक्त हुनसक्छ । विगतमा केही समय यस्तो प्रणाली लागू भए पनि त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । किन पाएन ? यसको जवाफ खोज्ने झन्झट कसैले पनि बेसाउन चाहिरहेका छैनन् ।
देश लोडसेडिङको समस्याबाट क्रमशः मुक्त हुँदैछ । दशकपछि लोडसेडिङको अनुहार देख्न नपाउने सौभाग्य काठमाडौँबासीले पाएका छन् । तसर्थ, अहिले बन्द अवस्थामा रहेको ट्रली बस र अरू विद्युतीय बस सेवाहरू सञ्चालन गरे वायु प्रदूषणमा स्वतः कमी आउने देखिन्छ । त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्मको पुरानै रुटमा पुनः ट्रली बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति इच्छाशक्ति नै सल्बलाउनु पर्छ ।
वायु प्रदूषण बढ्नुको अर्को कारण उपत्यकाभित्र रहेका इँटा कारखानाहरूले उत्सर्जन गर्ने दूषित वायु पनि हो । सरकारले इँटा कारखानाहरूले विद्युतीय प्रणालीबाट इँटा उत्पादन गर्नुपर्ने वा वायु प्रदूषण नहुने अरू उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने निर्देशलाई कडाइँपूर्वक पालना गर्न लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ । इँटा उद्योगलाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि वायु प्रदूषण कम गराउने उपाय खोज्नु राम्रो हुने देखिन्छ ।
तेस्रो कारण हो, उपत्यकाभित्रको औद्योगिक क्षेत्र । अहिले देशभरि ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् । तर, धेरै उद्योग भने उपत्यकाभित्रै छन्–बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा । उपत्यकाभित्र रहेका यी तीन औद्योगिक क्षेत्रले पनि वायु प्रदूषण निम्त्याउन उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेका छन् । काठमाडौँमा बढ्दो जनघनत्वका कारण र ती औद्योगिक क्षेत्रहरू मानव बस्तीहरूकै बीचमा रहेका हुँदा त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नेतिर सरकारले पहलकदमी चाल्ने हो भने पनि वायु प्रदूषणमा कमी आउनेमा निश्चिन्त हुन सकिने आधार देखिन्छ ।
यदि, आदिकविले भोगेको कान्तिपुर नगरीमा पुनः चपला, अवलाहरूले शिरमा गुनकेशरीको फूल लिई वरिपरि सखीहरू लिएर हिँडेका दृश्य नियाल्न इच्छा राख्ने हो भने धुँवा, धूलोले कट्कटिएको काठमाडौँबाट केही चिजहरूलाई छाँट्नै पर्छ । अरू विकल्प